Nezerlaandii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 15:21 26 Adooleessa 202115:21 26 Adooleessa 2021
Atileetiksiin adunyaa rikardii Latasanbat Gidey raggaasiseef
...tti maxxanfame 10:26 29 Onkololeessa 202010:26 29 Onkololeessa 2020
Holaand 'kafaltii gibiraa seeraan alaan' hogganaa waajjira qontsilaa Eertiraa uggurte
Ministeerri Dhimma Alaa Hoolaandi hogganaa waajjira Qontsilaa Ertiraa Heegitti argamuu dhorke
...tti maxxanfame 7:42 19 Onkololeessa 20207:42 19 Onkololeessa 2020
Miidhama Virjil van Daayik Liiverpuuliif qormaata guddaa tahuu malu
Taphataan sarara Ittisaa Liiverpuul Virjil Van Daayik miidhama jilba isaarra mudateen tajaajila baqaqsanii yaaluu taasifachuuf jedha.
...tti maxxanfame 7:29 19 Onkololeessa 20207:29 19 Onkololeessa 2020
MM Holaand gorsi maatii moototaaf kennan dogoggora tahuu amanan
Ministirri Muummee Nezarlaandis Maark Rutte imala maatii moototaa Giriikitti taasisan ilaalchisee, giddugaluu dhabuun isaanii dogongora tahuu amanan.
...tti maxxanfame 12:26 11 Onkololeessa 202012:26 11 Onkololeessa 2020
Atileet Siifan Hasan fiigicha fageenya m10,000n rikkardii Awurooppaa harka galfatte
Atileet Siifan Hasan dorgommii fiigicha fageenya m10,000 Hengiloo, Nezarlaanditti dorgomteen haala mijataa hin taaneefi rooba keessa fiiguun sa'aatii 29:36.67 tiin galuun rikardii Awurooppaatti qabamee ture fooyyeessite.
...tti maxxanfame 4:14 9 Onkololeessa 20204:14 9 Onkololeessa 2020
Namoota du'isaanii ga'eef nama hawwiisaanii dhumaa dhugoomsuuf
...tti maxxanfame 15:35 8 Fuulbaana 202015:35 8 Fuulbaana 2020
Jarman lammiilee Naayijeriyaa lama yakka waliin dha'utiin to'atte
Lammiileen Naayijeeriyaa lamaan to'annoo jala oolfamanis yakka waliin dhahuu yuuroo miliyoona 2.3 karaa intarneetiin raawwachuun shakkamaniiti.
...tti maxxanfame 7:52 5 Fuulbaana 20207:52 5 Fuulbaana 2020
Siifan Hasan fi Moo Faraan rikaardii atileetota Itoophiyaa cabsan
Dorgommii Daayimend Liigii Beeljiyeem Biraasilsitti dorgomamerratti dhalattuun Itoophiyaa Siifan Hasan dorgommii sa’aatii tokko fudhateerratti meetira 18,930 fiiguun rikoordii addunyaa haaraa galmeessite.
...tti maxxanfame 10:57 20 Guraandhala 202010:57 20 Guraandhala 2020
Waggaa 21 Neezarlaandsitti gonfoon gatii jabeessi durii harka nama Siraak Asfaaw jedhaman ture har'a Guraandhala 12, 2012 (A.L.I) Itoophiyaaf deebi'eera.
...tti maxxanfame 4:41 29 Amajjii 20204:41 29 Amajjii 2020
Qophii muuziqaarratti mobaayiloonni nama tokkoon hataman 30 qabaman
Qophii muuziqaa tokkorratti mobaayiloonni hataman 30n qabaman